Mucherechedzi: chiitiko chinotyisa chakashanduka kuita mutambo wevhidhiyo | Linux Vakapindwa muropa
Mucherechedzi kupona kunokatyamadza, kutya uye cyberpunk mutambo wevhidhiyo uyo uchaita kuti iwe utyore uropi hwako uchirarama zvinokanganisa zviitiko. Yakagadziriswa nekambani yePolish Bloober Team uye yakaburitswa neAspyr yemapuratifomu akasiyana siyana, pakati payo iyo Linux isati yawanikwa, nekuti yaingosanganisa rutsigiro rwekutanga rweWindows, Xbox ONE, PlayStation 4, kuti iwedzere kuwedzera rutsigiro rweLinux mapuratifomu uyezve Mac.
Mucherechedzi anoitika mumunhu wekutanga, uye kumisikidza mune remangwana sci-fi kuiswa mukati gore 2084 muPoland chaimo, imba yevagadziri. Mushure mechikwangwani chakadhura hupenyu hwezviuru zvevanhu uye chakakonzera hondo huru uye kuwanda kwemishonga. Mutambi mukuru ndiDaniel Lazarski, hunhu hwauchazofanira kubata semutambi wemutambo uyu wevhidhiyo. Daniel ndiye mutikitivha weKrakow anobva kuObserver Police Unit
Iye achange achitarisira kubiridzira ndangariro nekutya yezvinangwa zvaro nechishandiso chinozivikanwa seRoto Dining Kamuri inoshandisa matekinoroji matsva eizvi, kuitira kukunda matambudziko ese uye zvisingazivikanwe zvichamuka muRepublic yechishanu yePoland nemapurisa akakosha ekudzora vagari vayo kuburikidza nekubiridzira kwepfungwa. .
Yese nhoroondo iyi yakarungwa neinjini yemagetsi Shamisa Engine 4 kufambisa mifananidzo yayo, yakanaka Gameplay (chete mutambi, sezvo isina multiplayer muoti), uye zvose zvaunogona kutarisira kubva rinotevera chizvarwa vhidhiyo mutambo. Kunyangwe zita racho rakaburitswa zhizha rino, chokwadi ndechekuti vashandisi vazhinji vakambozviedza vakapa wongororo dzakanaka nezvazvo. Saka isu tinogona kutaura kuti iri rimwe zita nyowani ratinogona kuwedzera kune yatove runyorwa rurefu rwemitambo yemavhidhiyo yepenguin chikuva ... uye mazuva ese ivo vari kuwedzera uye zvirinani sezvataona mune ino blog.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Mucherechedzi: chiitiko chinotyisa chakashanduka kuita mutambo wevhidhiyo
MINIX iri mune dzimwe nzvimbo dzausingafungire ...